Maxay ka wada-hadleen Siciid Deni & Axmed Madoobe? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Maxay ka wada-hadleen Siciid Deni & Axmed Madoobe?
May 12, 2022 Xuseen 11
Madaxweynaha Puntland ahna Musharrax Madaxweynaha DFS H.E Said Abdullahi Deni, iyo Madaxweynaha Jubbaland H.E Ahmed Mohamed Islaam, ayaa xalay kulan ku qaatay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Kulanka oo ka dhacay hoyga Siciid Cabdullaahi Deni ayaa looga hadlay xaalada dalka, gaar ahaan doorashada Madaxweynaha 10-aad ee JFS loo balansan yahay 15-May oo ku beegan axada.
Axmed Madoobe oo dhowaan tagay Muqdisho ayaa ka wada Muqdisho olalaha doorashada Madaxweynaha DFS ee Siciid Deni oo ay wadaa dhow yihiin. Waxaana uu kulamo la qaatay.
DHILO, futo xaar leh la wareegaysa… nacatullahi caleek.. nacladii ILAAHEEY kugu dhacday..
Waa maxay akhlaaq xumo iyo Diin yari aad kulansatay?!
Maantey laga billaabo ku inkiray Labeebow, la doodkaakuna waa iga Hilib DOOFAAR!!! Duf ku bexe silloonaa oo sinji xumaa!! Kkk
Kkkkkkk waan hubaa dadbadan oo shurunshuur ahaa iyo sangurba ineey waalan doonaan ama is qarxin doonaan kkkkkk
DHILO futo xaar leh la wareegaysa.. Nijaaso socota lee tahay. Halkani waa guri gubeed… naga dhex bax.
DHILO futo xaar leh la wareegaysa… ILAAHEEY ku cadaab… naswaskhayn meeysid ee naga dhex bax.
Gunta iyo kuwa ciilka qaba waligood waa lootin jiray markay runta gaartana dharrbaaxooyin gobi sootuurtay ayaa lagu aamusin jiray haddana xaaladdu waa iska sidii, cbb iyo guntii soo dirsatay oohin iyo habaar iyo aflagaado ayaa ka soo haray kkkk gun waligeed waa iska sidaan! Kkkk
XAAR FARMAAJO waxaa uu mastaqbalkoodii wareejiyey xildhibaanadii Mareexaan ee GEDO. XAAR FARMAAJO waa loo xoog sheegtay. Xildhibaanadii GEDO waxaa laga soo qortay CEEL WAAQ. AXMED MADOOWBE iyo ROOBLE, iyo SACIID DENNI iyo MUUSE GEELEE aa u tashday.
SHAIKH AADAN MADOOWBE, markii uu la gorgurtay XAAR FAMAAJO, XAAR FARMAAJO waxaa uu miiska soo saaray ilaa USD 1.5 million.
AADAN MADOOBWE oo ordaayaa ayaa u yimid SHAIKH AXMED ISLAAM iyo SACIID DENNI iyo ROOBLE, oo ku yidhi XAAR FARMAAJO waxaa ii dhigay USD 1.5 million.
BOQOR SACIID DENNI ayaa jeebka furay, waxaana la dhuldhigay USD 3.00 million se meesha looga saar xildhibaanada GARBAHAAREEY and BOQOR DENNI hal mar oo qudha ayuu miiska saaray USD. 3.00 million… Halka XAAR FARMAAJO uu yidhi 750,000 USD waa hormarisay, inta kalena markii ay galaan Baarlamaanka.
Halkaase waxeey guusha ku raacday oo loo hiiliyey SHAIKH AXMED ISLAAM iyo saaxiibkiis BOQOR DENNI..
MAREEXAANOOW, jaahilnimadiini iyo jaahilnimadii XAAR FARMAAJO sidaas ku xildhibaan la’aada..
CIYAAL JECEL baa yaabay… afkii baa juuqa gabay…
Qofkan magaca Barawaani King kucaaytamaya waa copy e isagii ma aha. Qiyaastayda waa duqii Rugseege ahaa ee aydin is maagganaydeen oo Barawaani king magaca kawasakheynaya.
Kuwa sidan udhaqmaya armay iskugu sheekeeyeen inay yihiin muslimiin dhab ah ee sooma oo salaada? Bal aayaddan Qur’aanka Kariimka iyo Xadiiskan Nabawiga ahba qummaati ha udheexeen, lacalla inay naftooda dib ulaxisaabtamaan.
(Akhriso waxa Kitaabka lagaaga soo waxyooday oo salaaddana oog; xaqiiqdii, salaaddu waxay (qofka) kareebtaa fawaaxiishta iyo munkarka. Waxaana waxwalba ugu sarreeya xusidda Alle; Ilaahayna waa ka waxkasta oo aad falaysaan og)
“Ruuxa aysan salaaddu fawaaxishta iyo munkarka kareebin, salaaddiisu isaga ayay hoog iyo halaag ku noqonaysaa”
Xadiis kalena wuxuu ahaa:
“Ruuxa aysan salaaddu fawaaxishta iyo munkarka kareebin, salaaddiisu waa waxba-kamajiraan”
Dadka nabka iyo damiimnimada kudhaqmana Jannada waa laga xarrimay.
Abti, ninka caaytamayaa waa BARAWANI KING naftiisa waaye. Naagtaas AXADO hadii aysan rabin caay, waa in afkeeda xidhata.
Maalin dhoweyd, anoo sooman, wax caay la yiraahdo ilama harin. Marka waa edbinayaa in aysan mar dambe aysan halkaan ka caaytamin.
Anigo nina ma maago, laakeen ninka i soo maago waa i eeydayaa.
Waayahay abti, haddii aad adiguba iskuqirtay. Anigu labo goor ayaan isku dayay inaan idin kala dhexgalo oo labadiiba waji gabax ayaan kala kulmay.
Waxaan raalligelin buuxda halkan ugu qaddimayaa duqa ‘Runsheege’ kusooggala oo aan wax uusan sameyn kutuhmay. Waan kaxumahay.
CAAYDA WAA MAXAY CAAYDA ISKA DAAYA ILAAH KA BAQA.